Aammin Xigmadda Ilaahay ka Timaadday | Farriinta Kitaabka
Xigmad Ilaahay ka Timaadday
Buugga Maahmaahyadii wuxuu ka sameysan yahay talo Ilaahay ka timid oo nolosha tilmaan ka bixisa. Buuggan ugu badnaantiis Sulaymaan baa qoray
YEHOWAH ma Hoggaamiye xigmad leh baa? Markii la eego talada uu bixiyo jawaabta suʼaashaas si cad baa loo arki karaa. Taladiisu miyay shaqeysaa? Markii la xajiyo nolosha micno may u yeeshaa oo may wanaajisaa? Boqorkii Sulaymaan oo xigmadda badnaa boqolaal maahmaahyo ayuu qoray. Kuwani waxay ka hadlaan dhinac walba oo nolosha. Tusaalooyinkan bal eeg.
Ilaahay aammin. Haddii la doonayo in Ilaahay xiriir wanaagsan lala yeesho waxaa aad u muhim ah in la aammino. Sulaymaan wuxuu qoray: “Qalbigaaga dhammaantii Rabbiga ku aamin, oo waxgarashadaadana ha isku hallayn. Jidadkaaga oo dhan isaga ku qiro, Oo isna waddooyinkaaguu toosin doonaa.” (Maahmaahyadii 3:5, 6) Marka Ilaahay doondoonka taladiisa iyo addeecidda Eraygiisa aamminaad loogu muujiyo nolosha waxay noqotaa mid micno ku fadhido. Qofka sidaas yeelo waxay u suuraggelisaa inuu qalbiga Ilaahay ka farxiyo. Yehowahna wuu u jawaabi karaa arrimihii uu cadowgiisa Shayddaanka soo hadal qaaday.—Maahmaahyadii 27:11.
Xigmad dadka kula dhaqan. Waanada uu Ilaahay siiyo nimanka, naagaha iyo carruurtaba maanta aad bay u habboon tahay. Ilaahay nimanka wuxuu ku amray inay naagahooda daacad u ahaadaan oo wuxuu ku yiri: ‘Naagtaadii aad dhallinyaranimadaadii ku guursatay ku faraxsanow.’ (Maahmaahyadii 5:18-20) Afooyinka buugga Maahmaahyadii wuxuu si wacan ugu micneeya siday naagta wanaagsan oo ninkeeda iyo carruurteeda aammaanaan u eeg tahay. (Maahmaahyadii qaybta 31) Carruurtana tilmaan ku amraysa inay waalidkooda addeecaan baa la siiyay. (Maahmaahyadii 6:20) Buuggan waxa kale oo uu muujiyaa in saaxiibbo laga maarmi karin sababtoo ah gooni isu sooca xaasidnimo baa ka dhalato. (Maahmaahyadii 18:1) Si xigmad leh in saaxiibbo loo doorto muhimiyad weyn bay leedahay maxaa yeelay asaxaab waxaan ku raaci karnaa fiicnaan ama xumaan.—Maahmaahyadii 13:20; 17:17.
Xigmad naftaada kula dhaqan. Buugga Maahmaahyadii talo qiimo badan baa ku jirto. Wuxuu digniin inaga siiya isticmaal xumada khamriga. Wuxuu ku talo bixiya isku beeridda dareemada caafimaadka u fiican iyo ka hor taga kuwa u daran. Wuxuuna dadka u sheegaa siday u noqdaan shaqaale dadaal badan. (Maahmaahyadii 6:6; 14:30; 20:1) Wuxuu inaga waaniyaa inay masiibo ku dhammaato aamminaadda waddada binuʼaadanka oo bilaa Ilaah ah. (Maahmaahyadii 14:12) Buuggan wuxuu ina soo xusuusiyaa in ‘qalbiga noloshu ka soo baxdo.’ (Maahmaahyadii 4:23) Sidaa darteed waa inaan qalbiga ka dhawrno waxyaalaha kharribi karo.
Caalamka oo dhan malaayiin qof baa ogaaday in taladanu nolosha fiicnayso. Sidaa darteed waxay heleen sababo badan ay ku aqbalaan in Yehowah Hoggaamiyahoodii yahay.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay buugga Maahmaahyadii.
Dhigashada buugga Maahmaahyadii maxaan ka baran karnaa?
Taladee buu buugga Maahmaahyadii ka bixiyaa aamminaadda Ilaahay iyo xigmad kula dhaqanka dadka iyo naftaadaba?
Halkee baa micno iyo qanac laga heli kara? Sulaymaan darajadiisa gaarka ah baa u suuraggelisay inuu jawaabta doondoono. Xoolihiisa, xigmaddiisa iyo awooddiisa xaddhaafka ah buu ka baadhay inay farxad run ah keeni karaan. Maaliyaddiisuu ku raaxaystay, naago badan oo qurxoon buu guursaday wuxuuna isku madaddaaliyay waxyaabaha ugu raaxo badan. Wuxuu ka qaybqaatay dhisidda waxyaalo cajaaʼib ah. Wuxuu dhigtay qoraallada culimmada. Muxuuna ogaaday? Wuxuu yiri: “Wax waluba waa wax aan waxba tarayn.” Ugu dambeyntii garasho xaqiiq ah buu ku hadlay: “Xaalkan soo koobiddiisii waa tan. Waa la wada maqlay. Ilaah ka cabso, oo amarradiisana dhawr, waayo, taasu waa waxa binuʼaadmiga oo dhan u gudboon.”—Wacdiyahii 12:8, 13.
Wadaag Wadaag Xigmad Ilaahay ka Timaadday